बिधुत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नै किन ? – Sthaniya Patra
बिधुत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नै किन ?
By स्थानीय पत्र	 Last updated Sep 24, 2020
२०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा १२ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । पुरा देशभरी बिजुलि चुहावट थियो । माफियाहरुले छ्यालब्याल बिधुतको गलत प्रयोग गरेका थिए । यी सबै दलालहरुलाई कुलमानले करको दायारामा ल्याएर बिधुत चुहावट रोक्ने काम गरे । नेपाली जनताहरु सधै अन्धकारमा दिन रात कटाई रहेका थिए । लामो समय सम्म लोडसेडिङ हुँदा तीन करोड नेपाली जनता आजित भै सकेका थिए । नेपालमा लाेडसेडिङकाे मार सबै भन्दा बढी देशको भाबी कर्णधार बिद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई परेको थियो । प्रत्येक दिन बिधुत प्राधिकरणले दिएको लोडसेडिङको समय तालिका हेरेर नेपाली जनता बस्न बाध्य थिए। बिजुली आउँदा भगवान नै आए जस्तो हुन्थ्यो । त्यतिखेर नेपालको विद्युत क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै पुगेको थियो । तर कुलमान घिसिङ नेपाल बिधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए पछि उहाँकै पहलमा अहिले क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट पुगेको छ । कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपालको चर्चित नायक नेपाल बिधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए पछि लगत्तै उहाँको अपार मेहनत कार्यक्षमता कार्ययोजना दुरदर्शिता भिजनले गर्दा पदभार समालेको ६ महिना भित्रमा नै नेपाललाई लोडसेडिङ अन्त्य गरि प्रत्येक रात अधेरी हुने नेपाललाई आकाशे तारा झै चम्काउनु सफलता हासिल गर्नु भएको थियो । अहिले नेपालमा लाेडसेडिङ कम भएको पनि लक भग ४ वर्ष हुन लागेको छ । यी सबै कामको जस कुलमान घिसिङले नेतृत्व गर्नु भएको उहाँको टिमले गरेको काम कार्यकुशलता मेहनत सहित भिजनरी लिडरसिप गर्ने तीब्र क्षेमता देश जनता पर्तिको बफादारिता ठुलो कार्ययोजनाको कारण अध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपालमा परिबर्तन गर्न सम्भव भएको हो । नेपाल बिधुत प्राधिकरण पहिले कुल ३३ अर्ब घाटामा थियो । तर कुलमान बिधुत प्राधिकरण निर्देशक नियुक्त भए पछि पूरा देशलाई उज्यालो मात्रै बनाएर पनि ३३ अर्ब ऋण तिरेर घाटामा गएको बिधुत प्राधिकरणलाई ११ अर्ब खुद नाफा दिलाउन सफल भएका छ्न ।कुलमान घिसिङ अर्थात उज्यालो नेपालको जन्म दाता तीन करोड नेपाली बच्चा देखि बुढाबुढि बाबा आमा सबैले चिन्ने एक चर्चित नाम कुलमान घिसिङ नेपाली आमाको सच्चा सपूत छोरा उज्यालो नेपालको नायक हुन पुग्नु भएको छ। नेपाललाई चाहिने एक असल ईमानदार पात्रको रुपमा देखिनु भएको छ । उहाँको चौतर्फी चर्चा चुलिएको छ , देशको गल्ली गल्लीमा । कुलमान घिसिङ हरेक नेपालीहरुको मन भित्र बस्न सफल एक असल नेतृत्व बन्नु भएको छ। एक महान ब्यक्ति कुलमान घिसिङ अहिले चार तिर नेपाली जनताको मानसिकतामा सजिनु भएको छ । उहाँले बिधुत प्राधिकरणमा खेल्नु भएको भुमिका नेपाली जनताले सधै याद गर्ने छ्न भने नेपाली इतिहासमा बिधुत प्राधिकरणको स्वर्ण युग भनेर सुनौलो अक्षरले लेखिने छ ।
जनताले कुलमान घिसिङको कार्य सम्पादन, कार्य कुशलता, ईमानदारी मेहनत बाट अन्धकार नेपाललाई उज्यालो नेपालमा परिबर्तन गर्न सफल हुनु भएको थियो । त्यसैले कुलमान घिसिङ अर्थात उज्यालो नेपालको हिरो कुलमान घिसिङलाई तमाम नेपाली जनताले मनमा बसाउनु स्वभाविक हो । काम गरे पछि हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कुलमान घिसिङले देखाई सक्नु भएको छ । तसर्थ तमाम जनताले एकदम रुचाउने नेपाली जनताको मनमुटुमा बस्न सफल हुनु भएको छ । कुलमान घिसिङको ४ बर्ष कार्यकाल सकिने बेलामा पूरा नेपाली जनताहरु कुलमानलाई फेरि अर्को कार्यकालको लागि बिधुत प्राधिकरणको निर्देशक बनाउन सबै नेपाली जनताले दबाब दिदै आएका छ्न । तर दु:खद कुरा कुलमान घिसिङको ४ बर्ष कार्यकाल सकिन अन्तिम समय हुदा पनि नेपाल सरकारमा भएको सत्तारूढ दल अनि सम्मानित प्रधानमन्त्री केपि वोलिले नै मौनता देखाएका छ्न भने उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनको प्रस्तावलाई प्रक्रिया नपुगेको भनेर टार्ने काम भएको छ। समग्रमा सबै कुरालाई बिश्लेसण गर्दै सरकारको रबैयालाई मध्य नजर लगाउदा अहिले सरकार कुलमान घिसिङको दोश्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति दिन चाहिरहेको छैन भने प्रष्टसग बुझ्न गाह्रो भएन । विपक्षदल नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुपचाप मौनता देखाएर बसेको छ ।
नेपाली जनताबाट अनुमोदित भै आफ्नो अदभूत क्षमता देखाई सकेको उज्यालो नेपालको नायक कुलमान घिसिङलाई दोश्रो कार्यकालको लागि बिधुत प्राधिकरणको निदर्शक हुन किन र कसले छेक्यो ? कस्ले रोक्यो ? कुन कानुनले दिएन ? प्रधानमन्त्री ज्यु ! तपाईंको एक आदेशमा कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति हुन सक्नु हुन्थ्यो। तर त्यो गर्नु भएन यो दु:खद कुरा हो । जनमतको अबहेलना गर्नु भयो नेपाली जनताको सडककाे आवाज लाई सुन्नु भएन । यस्को हिसाब नेपाली जनताले ब्याज सहित प्रदान गर्ने छ्न । समय आए पछि बिचार गर्नु होला । जनताले चाहेको खण्डमा कस्ता कस्ता शासन सत्ता राजा माहाराजा त सत्ताचियुत भए जनताको मर्म भावना सङ्ग खेल्दा खेरी बिचार गर्नु होला। नेपाली जनताहरु पुरा सामाजिक संजाल देखि सडक आन्दोलन सम्म गर्दा देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्नु भएको छ । सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नु भएको छ । सायद कुलमान घिसिङ कुनै राजनीतिदलको मान्छे नभएर होला नेताको आफ्नो नातेदार आफ्नो भाइ बहिनी छोरा ज्वाइँ अथवा आफ्नो पार्टीको त्यहीँ भित्रको आफू निकटकाे मान्छे नभएको कारणले नै कुलमान घिसिङको पक्षमा यति धेरै जनदबाब हुँदा पनि चुपचाप गुपचुप बसेको छ सरकार ।नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सातौं पटक प्रधानमन्त्री बने। पुस्प कमल दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री बने । केपि वोलि दुई पटक प्रधानमन्त्री बने। रास्ट्रपति बिद्या भण्डारी दुई कार्यकाल रास्ट्रपति बनिन् । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति दोहोरिन पाए ।
शेरबहादुर देउवा ३/४ पटक प्रधानमन्त्री बने कुनै निति नियम लागु भएन ।देश लोडसडिङ हटाएर चौतर्फी नाम कमाएको कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकालको नियुक्तिको लागि जनताको साथ पुर्ण भए पनि सरकार किन बाधक छ ? सम्धीहरु लाई राज्यको प्रमुख अङ्गहरु सातौं पटक राजनीति नियुक्ति दिने कुलमान घिसिङलाई देखेर किन एलर्जी हुन्छ ? हाम्रो देशको शासकहरुलाई अहिलेको खडा भएको गम्भीर प्रश्नचिह्न यहि हो।
नेपालमाको ईतिहासमा भिन्न काल खण्डमा हजारौं नेपाली जनताहरुको ठुलो त्याग तपस्या सघर्स बलिदान बाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरुलाई केही सामन्तवादी सोचाइबाट ग्रसित मानसिकता बोकेको मान्छेहरुको कारणले देश अस्थिरताको भुमरीमा परेको तितो यथार्थ हामी माझछ। हिजोको दिनहरूमा राजा महाराजहरु रजौटा दरबारियाहरुको कारण देशमा बिकास नभएको हो । जनताले अधिकार नपाएको तमाम नेपाली जनता गरिब भएको भनेर राज्य विरुद्ध भीषण आन्दोलन गरेर २०५२ सालबाट शुरूवात भएको जनयुद्धको जगमा इतिहासिक २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनबाट नेपालको जाहनिया राज्य सत्तालाई तमाम नेपाली जनताको सहयोगमा सत्ताचियुत गरियो । गणतन्त्र ल्याउनको लागि हजारौं संख्यामा नेपाली जनताको छोराछोरीले देश जनताको मुक्तिको लागि आफ्नो अमुल्य जीवनलाई आहुती दिएर सहिद भएर गए । संघर्सको क्रममा व्यापक अङ्ग भङ्ग भए। नारीहरुको सिन्दुर पुछिए । बालबालिका टुहुरा बने बुढाबुढी बाबा आमा बुढेसकालमा ब्यसाहारा भएका छ्न। उनीहरुको सम्पुर्ण लालन पालन पोषन सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्छ । रगतको होलि खेलेर आएको गणतन्त्र हो त्यतिकै भाडा कुटि खेल्दा आएको होईन । गणतन्त्र नेपाली जनताले गणतन्त्र चाहियो भनेर कसैले ला भनेर दिइएको कदापि होईन । नेपाली जनताको रगतको भेलले बगाएर यहाँ सम्म आएको गणतन्त्र हो । अहिलेको शासनमा रहेको राजनीतिक नेताहरुलाई हेक्का रहोस् । जनताको अधिकारको बिषयमा देशको बारेमा खेलाची गर्ने काम नगर्नु होला ।
नयाँ नेपालको परिकल्पना सहित सुनौलो भबिस्य लिएर आएको गणतन्त्र हो । तानाशाही फासीबादी शैलीमा दलाल भस्टचारिहरु कमिसनखोर भुमाफिया बिचौलिया डन बिदेशी एजेन्डहरुले चलाउने हो भने सरकार नातावाद आसे पासे राजनीति झोलेहरुलाई अराजकता गतिविधि गर्ने दिने हो भने कार्यपालिका न्यायपालिका ब्यवस्थापालिकामा राजनीति नियुक्ति गरियो भने पकै पनि राज्यमा शान्ति शुसान बिकास जनताको अधिकार तहस नहस हुने छ । अब सम्पुर्ण देश भक्त नेपालीहरुले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । त्यसैले कुलमान घिसिङलाई बिधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निदर्शकमा फेरि दोश्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति गर्न देश ब्यापी रुपमै आबाज बुलन्द गरौ ।
गौ संरक्षण एवम् अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन
शरीरको स्वरूपलाई होइन, चेतनालाई चिनौँ
सिद्धवावामा हाईलक्स गाडी खस्यो, ६ जना घाइते
हङकङमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएका राईको भोजपुर जाने क्रममा…
नवलपुरको हुप्सेकोटका ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी, जिल्लामा…
आठ दिनपछि अवरोध हट्यो, अब उपत्यकाको फोहर उठ्ने
संकटको लगानी र भोका पत्रकारको भारी
बागमतिका मुख्यमन्त्री पाण्डेले लिए शपथ